ဘာကြောင့်အမျိုးသားအများစုသည် Web Porn ကိုကိုင်တွယ်ရန်လူမလောက်သနည်း - သင့် Porn On Your Brain
အများစုမှာအမျိုးသားများက်ဘ် Porn ကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်ယောက်ျားမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်
Alain က de Botton အားဖြင့်
အားလုံးပါတီများ, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာပေါ်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ မေးခွန်းရှိခြင်း၏နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါသည် အလွန်အကျွံ လွတ်လပ်ခွင့်, ဒါမှမဟုတ်အလွန်မှားယွင်းတဲ့လမ်းအတွက်အသုံးပြု၏, ကချမ်းသာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာဂရုစိုက်သည်အခြားအမှုအရာကိုထိခိုက်မှစတင်သည်နိုင်အောင်။
အဆိုပါကိစ္စကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးဦးခေါင်းထံသို့မရောက်ရ။ ကအခမဲ့တိုင်းပြည်င်: အဆိုပါစံအမြင်ကလူသူတို့က, သေနတ်မဝယ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာများကိုစားကွာရှင်းနှင့်ရှစ်ကြိမ်နောက်အိမ်ထောင်နဲ့သူတို့ရဲ့အခွက်၏ဘာမျှမအောင် left ရပါမည်သကဲ့သို့သလောက်သူတို့ကြိုက်သလောက် porn ကိုကြည့်ဖို့ထွက်ခွာသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် နောက်ဆုံးတော့။
သို့သော်လွတ်လပ်ခွင့်ကဘာလဲ? သင်ဓမ္မပညာရှင်နှင့်ဒဿနပညာရှင်စိန့်သြဂတ်စစကားကိုနားထောငျလြှငျ, အစစ်အမှန်လွတ်လပ်ခွင့်သမျှဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မဆိုလိုပေ။ နှင့်, ကအောက်ပါအတိုင်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးသောအရာအများအပြားမှကာကွယ်ခံရ - ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်အသက်အဘို့လိုအပ်သောကြောင်းအရာအားလုံးကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားခံရဆိုလိုသည်။
ညစ်ညမ်းစဉ်းစားပါ။ ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်အရက်နှင့်အက်ကွဲကိုကင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အချို့လူများအလွန်အမင်းသွေးဆောင်င်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အများကြီးကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မလိုသူကိုဝေဖန်သုံးသပ်, တစ်ချိန်က Playboy အတွင်း၌တစ်ဦး peek ခဲ့သို့မဟုတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးရဲ့အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်ဟိုတယ်ကြွင်းသောအရာများ၏ရုပ်သံလိုင်းအပေါ်တစ်ဦးဆိုးရုပ်ရှင်တစ်ဦး preview ကိုဖမ်းမိခဲ့ကြလိမ့်မယ်တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့်လည်းမရှိ။ Cisco သည်, Dell, တက်ကိုဖန်ဆင်းတစ်ဦးကအဓိကအားမသိသောမဟာမိတ်ဖွဲ့ et al နှင့်ညစ်ညမ်းပံ့ပိုးပေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယခုအထီးကျား, မတစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုအပြစ်အနာအဆာအမြတ်ထုတ်နေတဲ့လမ်းတွေ့ပြီ။ မူလလယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှဖြတ်ပြီးတစ် tribesperson တစ်ခုရံဖန်ရံခါတစေ့တစောင်းထက်ပိုသွေးဆောင်ဘာမျှမနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးကဦးနှောက်တစ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှာပိုက်ကွန်အပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ယခုဖွင့်အဘယျသို့နှင့်အတူပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်: သည်ဟုတတျနိုငျသမဆို outstripping အခြေအနေတွေအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်သည့်အခါ အဆိုပါ Marquis က de Sade ၏အနာရောဂါစွဲစိတ်ကိုတက်အိပ်မက်မက်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာစွမ်းရည်အတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်-Up အတွက်လုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ဘာမျှရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ဖတ်ပါနှင့်မြင်သောအရာကိုမှအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ အမှုအရာပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကိုလျှော်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်၏ရှေ့တော်၌ဆုံးရှုံးထံမှဖြစ်ကြောင်း, ဆိုလိုတာကအသည်းအသန်နှင့်အဖျက်ဟော်မုန်းများနှင့်အလိုဆန္ဒများအားဖြင့်ဒဏ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းမိုသတ္တဝါများအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒီအားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-image ကိုကဲ့ရဲ့စေခြင်းငှါသော်လည်း, မှားဓါတ်ပုံတွေကိုအမှန်တကယ်မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချပေးပို့လိမ့်မည်။ အကူအညီမရပါကဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ကြင်နာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူဖျက်ဆီးကစားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်၏သင်တန်းကျနော်တို့အနေနဲ့ထင်သလိုနှင့်အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ထံပေးအပ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်တခါတရံအချို့သောအခင်းအကျင်း၌အကြှနျုပျတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးသီအိုရီန့်သတ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်အကြံပြုပါဘူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုခချမ်းသာများ၏မျက်နှာကို ထောက်. နှင့် ပွင့်လန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါ - - ကျွန်တော်တို့ဟာလောင်အဘယျသို့ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုယူလျှင်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်တစ်ခုကြီးမားမျက်နှာသာလုပ်နေနိုင် Lucid ၏အချိန်လေးတှငျကြှနျုပျတို့ untrammeled လွတ်လပ်မှုထောင်ချောက်ကျွန်တော်တို့ကို၎င်း, နိုင်ကြောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့တန်ဖိုးထားနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
ဒါဟာဘာသာရပ်အပေါ် uncensorious နှင့်စေတနာစိတ် "ခေတ်သစ်" ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သူကသူတို့ယုတ္တိတည်ကျော်လိင်အပြည့်အဝအာဏာကိုခံစားခဲ့ရပြီမဟုတ်သူကိုဖြစ်ကောင်းသာလူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကို၏အတွေးအခေါ်များသူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတခါလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုလည်းအဖျက်သို့မဟုတ်လိုက်တယ်ဘာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကလူတွေကိုအများအားဖြင့်အယူခံ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးများအားလမ်းလွှဲပြောင်းဖို့အထူးသဖြင့်ယေဘုယျနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွက်လိင်၏တန်ခိုးကြုံတွေ့ခဲ့သူမည်သူမဆိုလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ဒီတော့ဒီလောက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်း, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့ကိုစနစ်တကျကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုညွှန်ကြားရန်အဘို့အလိုအပျသညျ့ဖြစ်ကြောင်းဆငျးရဲဒုက်ခ၏မျိုးခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအားနည်းနေခြင်း။ အထူးသဖြင့်, ထိုနှစ်ခုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးကုန်ပစ္စည်းများ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ပျင်းသည်းခံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်လျော့နည်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ခံစားမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်တစ်ခုခုလွဲသည် ဖြစ်. , ဒါသူတို့စကားကိုနားထောငျနှင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အနက်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအချက်ပြမှုများကိုထွေး - ငါတို့သည်အစဉ်အဆက်ကိုတီထွင်အာရုံ၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံး tools များထဲကတစ်ခုလက်ဖို့ရှိသည်သည့်အခါဖြစ်ပျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်၏။ တစ်ခုလုံးကိုအင်တာနက်ကကျနော်တို့ခုခံတွန်းလှန်ဖို့မပင်စွမ်းရည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်လိုအပ်ချက်နဲ့ဘာမှရှိအများအပြားရာလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချပို့ဆောင်ပေးသောစနစ်တစ်ခုရှိသည်သောအဆက်မပြတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကယ်တင်ဖြစ်ပါသည်, တစ်နည်းညစ်ညမ်း၌တည်ရှိ၏။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းကြှနျုပျတို့၏စိတျကောင်းသောစိတ်ကူးများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက်အာကာသကျနော်တို့ရေချိုးတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးရှည်လျားသောမီးရထားခရီးတွေ့ကြုံခံစားဖန်တီးမှုပျင်း၏မျိုးပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်သောပျင်း၏ကြင်နာဘို့ငါတို့သည်းခံအားနည်းနေခြင်း။
သာဘာသာတရားနေဆဲကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့-ကျင်းပဦးစားပေးအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဖို့လိင်၏တန်ခိုးကိုတန်ဖိုးထား၏သဘောအရအလွန်အလေးအနက်ထားလိင်ယူပါ။ သာဘာသာတရားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်စောင့်ဖို့လိုတစ်ခုခုအဖြစ်လိင်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့အစားလိင်ကျနော်တို့သူတို့ဆင်ဆာလမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအမှန်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုမိုမြင့်မားဆင်ခြင်တုံတရားစှမျးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူးအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆန္ဒရှိမည်ဟုအဘယျသို့ဘာသာတရားနှင့်အတူစာနာမည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါလောကကမ္ဘာကြီးကိုအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ hijab ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့် burka များအတွက်အထူးသဖြင့်ကဲ့ရဲ့ရှိသည်။ ယုံကြည်သူများတစ်စုံတစ်ဦးက scantily ဝတ်ကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ်မိမိတို့၏အာရုံကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဦးတည်း, ခြေချောင်းမှဦးခေါင်းကနေမိမိကိုယ်ကိုတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အံ့သောငှါထိုစိတ်ကူးလောကီ၏အုပ်ထိန်းဖို့ preposterous ပုံရသည်။ တစ်ဆင်ခြင်တုံတရားအရွယ်ရောက်ပြီးသူကယ့်ကိုအမျိုးသမီးဒူးထောသို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ်ချိုး beguiling တရံ၏မျက်မှောက်မှအကောင့်မှာမိမိတို့အသက်တာကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မလား? တဦးတည်းပြင်းထန်စွာအဆိုပါ beachfront ချ ထပ်. အတင်းအကြပ် sauntering ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းဆယ်ကျော်သက်တစ်စုကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးသည်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်လော
အခြားအကြောင်းတို့ကြောင့်လိင်နဲ့အလှအပကိုငါတို့အပေါ်မှာအရေးပါတဲ့ပါဝါကွိုးစားအားထုဖို့အလားအလာရှိသည်သောယုံကြည်ပါဘူး, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လောကကမ္ဘာကြီးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အပေါင်းတို့နှင့်မျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေါသနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်တဦးတည်း၏ဘဝနှင့်အတူပေါ်ရ - တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်အတွက်အလှတရားကိုကြည့်ရှုရန်အတော်လေးနိုင်တော့မည်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
ဒါဟာကိစ္စအတော်လေးဒါရိုးရှင်းသောမကျမည်အကြောင်းအကြံပြုဖို့လူ့အလှတရားစော်ကားမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာကမဟုတ်ရင်စဉ်းစားရန်အလှတရား၏တနျခိုးဖို့အခွန်ဆက်ရသည်။ ဘာသာတရားရာတှငျမဝံ့မရဲပေမယ့်ဝေးဖြစ်ခြင်းများအတွက်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိဘာသာတရားလိင်ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးအဖြစ်ကြောင့်အလိုဆန္ဒ၏ကျက်သရေနှင့်အာဏာတစ်ခုတက်ကြွစွာအသိပညာပေးထဲကဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအတော်လေးဒါအံ့သြစရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတန်ဖိုးထားမပြုခဲ့ပါလျှင်သူတို့ကလိင်အတော်လေးဒါမကောင်းတဲ့ခဲ့သည်ဟုမထင်လိမ့်မယ် - သူတို့ကဒီသေချာပေါက်ကြောင့်လည်းတချို့၏လမျး၌အရမည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောင်းဝန်ခံရန်လုံလောက်သောသတ္တိမပါလျှင် ဘုရားသခငျသညျသို့မဟုတျသငျ့ဘဝများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲအရေးကြီးသောနှင့်အဖိုးတန်အရာ။
ငါတို့သည်နောက်တဖန်တစ်ဦးဘုရားကိုယုံကြည်ရင်တောင်ဖိနှိပ်မှုတစ်ဒီဂရီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲ-လမ်းအမိန့်များနှင့်မေတ္တာရှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လုံလောက်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာမှထင်ရသောလိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်စိတ်၏အဘို့ကိုမြေအောက်အတင်းအဓမ္မခံရဖို့ရှိပါတယ်, ဖိနှိပ်မှုရုံကက်သလစ်, မွတ်စလင်နှင့်ဗစ်တိုးရီးယားအဘို့မဟုတ်ခဲ့, ကထာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အလုပ်ကိုသွားဆက်ဆံရေးမှကိုယျ့ကိုယျကိုကျူးလွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတို့အဘို့ဂရုစိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်စူးစမ်းဖို့ရှိသည်သောကြောင့်, ငါတို့သည်ငါတို့၏သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြခွင့်ပြုလို့မရဘူး, ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖကျြဆီးခွငျးလိမ့်မယ်။ လိင်ကျနော်တို့လက်တွေ့ကျကျအစဉ်အဆက်ကိုမျှော်လင့်သို့မဟုတ်လုံးဝဖြစ်လိမ့်ချင်မဖွစျသငျ့ရာမှတစ်ဦးအင်အားစုဖြစ်ပါတယ် "လွတ်မြောက်။ "
Alain က de Botton "အသစ်တခုစာအုပ်၏စာရေးသူဖြစ်ပါသည်လိင်အကြောင်းပိုစဉ်းစားပါရန်ကဘယ်လို"Picador နှင့် Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေတစ်စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရန် www.theschooloflife.com